करिश्मा आईन् साईकल चढी, कस्को सपनामा छाईन् बढी ? (भिडियो बोल्छ) « Mazzako Online
करिश्मा आईन् साईकल चढी, कस्को सपनामा छाईन् बढी ? (भिडियो बोल्छ)
सदावहार नायिका करिश्मा मानन्धरको सौन्दर्यताको प्रशंसक को नहोला ? ४५ बसन्त नजिक भएपनि उनी १६ बर्षे किशोरी झै देखिन्छिन् । उनले आफुलाई निकै मेन्टेन गरेकी छिन् । भर्खरै रिलिज गरिएको ‘जुन तारासँगै रातमा आउँछु भनेर’ बोलको गीतमा उनलाई झनै राम्री देखिएको छ ।
म्युजिक भिडियोमा उनलाई सत्तरीको दशकको लुक्समा प्रस्तुत गरिएको छ । केन्द्रिय चलचित्र जाच समितिमा बोर्ड सदस्यको रुपमा कार्यरत चलचित्र निर्देशक सुरेश दर्पण पोख्रेलले भिडियोको निर्देशन गरेका हुन् । म्युजिक भिडियोका लागि फेसन स्टाईलिस निलिमा शर्माले करिश्मालाई सुन्दर बनाएकी हुन् । भिडियोको कोरियोग्राफी कमल राईले गरेका हुन भने हरि हुमागाईले खिचेका हुन् ।
प्रनेशको आवाज रहेको गीतको भिडियोलाई गोदावरीमा छायांकन गरिएको हो । यही गीतबाट नायिका करिश्मा मानन्धर म्युजिक खबर अवार्ड २०१४ को सर्वोत्कृष्ट सुगम संगीत म्युजिक भिडियो मोडल महिलाको नोमिनेसनमा समेत परेकी छिन् ।